အများပြည်သူဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက် | FLEGT
အများပြည်သူသတင်းအချက်အလက်၏ VPA နောက်ဆက်တွဲ
အများပြည်သူသတင်းအချက်အလက်၏ နောက်ဆက်တွဲသည် သစ်တောကဏ္ဍအတွင်း အုပ်ချုပ်ရေးကို စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရန်နှင့် ဆန္ဒအလျောက်မိတ်ဖက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီချက် (VPA) အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းကို စောင့်ကြည့်ရန် ပြည်သူလူထုသို့ ထုတ်ပြန်သင့်သည့် သတင်းအချက်အလက်များနှင့် စာရွက်စာတမ်းများကို ဖော်ပြထားသည်။
ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခြင်းနှင့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏သစ်တောကဏ္ဍနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက် များကို ရယူခွင့်ရှိခြင်းသည် အမျိုးသားအဆင့်အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများနှင့် နိုင်ငံတကာဈေးကွက် များအတွက် အရေးပါပြီး နိုင်ငံအတွင်း အသင့်ရှိနေပြီးဖြစ်သောစနစ်များကို နားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ VPAs သည် သစ်တောကဏ္ဍသတင်းအချက်အလက်များကို ပြည်သူလူထုသို့ချပြသည့်နိုင်ငံများအတွက် ဤပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာပရိသတ်ကိုသရုပ်ပြရန်အခွင့်အရေး တစ်ရပ်ဖန်တီးပေး ပါသည်။
အချို့ VPA မိတ်ဖက်နိုင်ငံများတွင် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများသည် စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများအဖြစ် တာဝန်ယူပြီး VPA ဆွေးနွေးပွဲများတွင် ပြည်သူလူထုသို့ သတင်းအချက်အလက် ထုတ်ပြန်ခြင်း ကို ဦးဆောင်လေ့ရှိသည်။
ဥပမာအားဖြင့် အင်ဒိုနီးရှားတွင် ပြည်သူလူထု သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း၏ VPA နောက်ဆက်တွဲသည် လွပ်လပ်သည့်ကြားအဖွဲ့မှ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများ၏ တောင်းဆိုချက်များအတိုင်း ထုတ်ပြန်ပြီး နိုင်ငံ၏ သတင်းအချက်အလက် လွတ်လပ်ခွင့်ဥပဒေအရလည်း အကျုံး၀င်သည်။
ယနေ့အထိ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးသမျှ အများနှင့်သက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်နှင့်ပတ်သက်သည့် နောက်ဆက်တွဲများတွင် အဓိကသတင်းအချက်အလက်အမျိုးအစား ၂ မျိုးရှိသည်။ ပထမတစ်မျိုးအား ဥပဒေဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ သို့မဟုတ် သစ်တောကဏ္ဍအုပ်ချုပ်ခြင်းအတွက် အဖွဲ့အစည်း ဆိုင်ရာစီစဉ်မှုများကဲ့သို့ ရှိလာသည့်အခါထုတ်ပြန်ရမည့်သတင်းအချ ဒုတိယ တစ်မျိုးအား သစ်တောကဏ္ဍလှုပ်ရှားမှုများဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းနှင့် အစီရင်ခံစာများကဲ့သို့ ပုံမှန်ထုတ်ပြန်ရ မည့် သတင်းအချက်အလက်
သို့ရာတွင် VPA အဖွဲ့၀င်တို့မှ စိတ်ဆန္ဒ့ရှိလျှင် နောက်ထပ် သတင်းအချက်အလက်များကို ဖော်ပြနိုင်သည်။
ယနေ့အထိ လက်မှတ်ထိုးပြီးသမျှ VPAs များတွင် အများပြည်သူ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း၏ နောက်ဆက်တွဲပါ သတင်းအချက်အလက်စာရင်းများတွင် အောက်ပါတို့ ပါ၀င်သည်။ ။
ဥပဒေသတင်းအချက်အလက်။ ကန့်သတ်ထားခြင်းမဟုတ်သော်လည်း နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏သစ်တောကဏ္ဍနှင့် ဆက်စပ်နေသောဥပဒေများ နှင့် စည်းမျဉ်းများ၏စာသားများကိုထည့်သွင်းထားခြင်း။ ဥပမာအားဖြင့် သစ်တောဥပဒေ၊ သစ်တောကျင့်ဝတ်စည်းကမ်း၊ အခွန်ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်း နှင့် တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင် ရည်ညွှန်းထားသည့်စည်းမျဉ်းမူဘောင်၏ရှုထောင့်များ ဥပမာအားဖြင့် သစ်တောဥပဒေ၊ သစ်တောကျင့်ဝတ်စည်းကမ်း၊ အခွန်ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်း နှင့် တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင် ရည်ညွှန်းထားသည့်စည်းမျဉ်းမူဘောင်၏ရှုထောင့်များ
အောက်ပါတို့နှင့်ဆက်စပ်နေသော သတင်းအချက်အလက်ကဲ့သို့သော သစ်တောများခွဲဝေခြင်းအတွက် လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်
တင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် လုပ်ကိုင်ခွင့်ခွဲဝေခြင်း ခွင့်ပြုမိန့် အတွက် တင်ဒါခေါ်ယူရန် သတိပေးခြင်း
ယှဉ်ပြိုင် တင်ဒါအဆိုပြုရန်လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ
တရား၀င် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသော ပုဂ္ဂိုလ် နှင့်၊ သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီအမည်နှင့် မြေပုံများ၊ ဇယားများ
သစ်တောဆက်စပ်သည့်ဒေသခံပြည်သူများနှင့် ပါမစ် သို့မဟုတ် စာချုပ်ကိုင်ထားသူအကြား လူမှုရေးကတိက၀တ် စာချုပ်များ
သစ်တောစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ တွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဆန်း စစ်မှုအစီရင်ခံစာများ၊ မြေအသုံးချမှုစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းစာရွက်စာတမ်းများ၊ မြေပုံများ၊ စာရင်းများ နှင့် လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားသည့် မြေဧရိရာ စုစုပေါင်း ကိုဖော်ပြသော သတင်းအချက်အလက်
ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက် တွင်ခုတ်လှဲအချောထည်ပြုလုပ်သည့်သစ်ထုထည် ပမာဏတို့ကို သစ်အမျိုးအစား၊ လုပ်ကိုင်ခွင့်၊ ကုမ္ပဏီအလိုက် ဖော်ပြသော သတင်းအချက်အလက်
အချောထည်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက် တွင်အတည်ပြုထားပြီးသောအချော ထည်လုပ်ကိုင်သူများ၏ စာရင်းနှင့်တည်နေရာများကို ဖော်ပြသော သတင်းအချက်အလက်
သွင်းကုန်နှင့်ထုတ်ကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက် တွင် အမျိုးအစားအလိုက် သစ်ထုထည် ပမာဏ၊ ကုမ္ပဏီနှင့် သစ်တင်ပို့မည့်နိုင်ငံနှင့် သစ်အကူးအပြောင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက် အလက်
စနစ်အကြောင်း ဖော်ပြချက် အပြည့်အစုံ
FLEGT လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်
လွပ်လပ်သည့်ကြားအဖွဲ့မှ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများ၏ အစီရင်ခံစာများ
ထုတ်ပေးထားသော FLEGT လိုင်စင်၏ သတင်းအချက်အလက်
FLEGT လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း စည်းမျဉ်းနှင့် မကိုက်ညီသည့် ကိစ္စများ
မလိုက်နာသည့်ကိစ္စများ ဖြေရှင်း ကိုင်တွယ်ခြင်း
လွတ်လပ်သောစာရင်းစစ် နှင့် ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက် - စာရင်းစစ်၏သတ်မှတ်တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ၊ အစီရင်ခံစာအကျဉ်းချုပ်များနှင့် စိန်ခေါ်နေသည့်စာရင်းစစ်များအတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း စသည်များ
သစ်တော အခွန်နှင့် ဝန်ဆောင်ခများ ပေးချေခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက် - ငှားရမ်းခြင်း၊ သစ်ခုတ်လှဲခြင်းအခွန်၊ သစ်တော ပြန်လည်ထူထောင်ကြေးနှင့် အခြားအဖိုးအခများ ကုန်ကျစရိတ်များ စသည်များ
ဥပဒေအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိရေးနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက် - ဥပဒေချိုးဖောက်ခြင်းများ၊ ဖမ်းဆီးခြင်းများ၊ ပြစ်ဒဏ်များနှင့် ပြစ်ဒဏ်ကျခံစေခြင်းကဲ့သို့သော သတင်းအချက်အလက် စသည်များ
အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများ နှင့် အစိုးရလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက် - အမျိုးသားအဆင့်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများ၏ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန် စသည်များ
အများနှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက် နှင့်ပတ်သက်သည့် နောက်ဆက်တွဲများတွင်လည်း ပြည်သူလူထု သို့ သတင်းထုတ်ပြန်ရန်အတွက် လမ်းကြောင်းများကို ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းလမ်းကြောင်း များမှာ
ထိရောက်မြန်ဆန်သောဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများမှတဆင့် နိုင်ငံတော်သည်သတင်း အချက် အလက်များကို ထောက်ပံ့မည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာများတွင် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူ အစည်း အဝေးများ၊ ပုံနှိပ်ဖြန့်ဝေမည့် အစီရင်ခံစာများ သို့မဟုတ် ရေဒီယို၊ ရုပ်မြင်သံကြားစသည်တို့မှ ကြေငြာချက်များ ပါဝင်ပါသည်။
သွယ်ဝိုက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများသည် အချက်အလက်များကို သိရှိနိုင်စေရန် ၀က်ဘ်ဆိုက်များ၊ စာရွက်စာတမ်း ဌာနများ သို့မဟုတ် သတင်းအချက်အလက် လွတ်လပ်ခွင့်ဖြင့် တောင်းဆိုလာမှုများကို တုံ့ပြန်ဖြေကြားပေးခြင်းများ စသည်တို့ဖြစ်သည်
ဂါနာ၏ VPA သည် မည်သို့ ကွဲပြားသနည်း
ပထမဦးစွာလက်မှတ်ထိုးခဲ့သည့်ဂါနာ၏ VPA သည်အများနှင့်သက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်နှင့် ပတ်သက်သည့် နောက်ဆက်တွဲမရှိပါ။ သို့ရာတွင် တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံ သည့်စနစ်နှင့် ပတ်သက်သည့် နောက်ဆက်တွဲသည် ပြည်သူလူထုသိရှိနိုင်သည့် ကိန်းဂဏန်းအချက် အလက်များကို ဖော်ပြထားသည်။ ထို့အပြင် VPA အဓိကစာသား၏ အပိုဒ် ၂ဝ ၌ ပြည်သူလူထုသို့ အစီရင်ခံခြင်း နှင့်ထုတ်ဖော်ခြင်းတွင် ပူးတွဲ စောင့်ကြည့်ရေးနှင့် ပြန်လှန်သုံးသပ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်သည် ဂါနာ၏ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရေးကိုဦးတည်သည့် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ရမည် ဟုဖော်ပြထားသည်။ စာပိုဒ်သည်အောက်ပါတို့ကိုရည်ညွန်းပါသည်။
သစ်ခုတ်လှဲခြင်း အခွင့်အရေးအတွက် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု
သစ်ခုတ်လှဲခြင်းအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ဧရိယာများ
သစ်အခွင့်အရေးအခကြေးငွေနှင့် သစ်ခုတ်လှဲခြင်းဆိုင်ရာ ပေးဆောင်ရန်ငွေကြေးများ
လူမှုဘ၀ တာ၀န်ခံမှု စာချုပ်များအပေါ် သတင်းအချက်အလက်နှင့် သီးနှံပျက်စီးမှု လျော်ကြေးငွေပေးခြင်းအတွက် လျော်ကြေးများ
Global Witness.2012. Making the Forest Sector Transparent. VPA Transparency Gap Assessment 2012 [PDF ဒေါင်းလုဒ်ရန်]